Kọmputa laptọọpụ anaghị arụ ọrụ: Otu esi edozi ya? | Nzukọ Ekwentị
Kọmputa laptọọpụ anaghị arụ ọrụ: Otu esi edozi ya?
Jesus Sanchez | | Sistemụ arụmọrụ, Windows
Igodo laptọọpụ bụ akụkụ dị mkpa nke ya. Na-enweghị ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ngwaọrụ enweghị ike iji ya rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na gị na laptọọpụ kiiboodu anaghị arụ ọrụ ma ị maghị otu esi edozi ya, na ọkwa ọzọ anyị ga-egosi gị esi edozi ya.
Lee, anyị ga-enye gị ndụmọdụ kachasị mma iji dozie keyboard gị laptọọpụ -enweghị ịga ụlọ ọrụ pụrụ iche na teknụzụ nke ahụ metụtara nnukwu ego ma ọ bụrụ na laptọọpụ gị anọghị n'okpuru akwụkwọ ikike.
Mkpa: N'ime usoro ndị a iji dozie laptọọpụ, ị ga-achọ nke ahụ touchpad na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-ejikọ a mpụga USB òké na / ma ọ bụ a mpụga USB.
Ọ bụrụ na anyị enweghị kiiboodu mpụga, Windows na-enye anyị kiiboodu wuru na ihuenyo n'onwe ya nke akwụkwọ ndetu iji rụọ ọrụ na oke.
1 Esi rụọ ọrụ Windows 10 na keyboard
2 Kedu ihe dị na kọmpụta laptọọpụ m?
3 Esi edozi laptọọpụ laptọọpụ ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ
3.1 Otu esi edozi ya ma oburu na obu software
3.1.1 Gbanyụọ laptọọpụ ma gbanyụọ
3.1.2 Lelee Windows components na Command ozugbo
3.1.3 Melite ọkwọ ụgbọala keyboard
3.1.4 Tinyegharịa ndị ọkwọ ụgbọala keyboard
3.1.5 Lelee na emebere keyboard ahụ n'asụsụ anyị
3.1.6 Wụnye antivirus ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala keyboard
3.2 Otu esi edozi ya ma oburu na obu nsogbu ngwaike
3.2.1 Lelee ma ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu ngwaike: anyị na-abanye na BIOS na keyboard
3.2.2 Abụọ ngwọta ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ ngwaike
3.2.2.1 Were laptọọpụ gaa ọrụ ọkachamara na ndị ọkachamara ọkachamara
3.2.2.2 Yana screwdriver, anyị na-emeghe kiiboodu (anaghị atụ aro ya)
Esi rụọ ọrụ Windows 10 na keyboard
Windows na-etinye ngwa ọrụ iji nwee ike iji keyboard na ihuenyo pc ma rụọ ọrụ ya na oke. Iji nweta ya, anyị ga-eme ihe ndị a:
Na nyocha ọchụchọ na ala aka ekpe nke ihuenyo ahụ, anyị na-ede: Igodo kiiboodu.
Anyị nwere ike iji kiiboodu na ihuenyo site na òké. Ọ bụghị ihe kachasị mma n'ụwa, mana ọ naghị azọpụta site na ọsọ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ dozie kiiboodu, anyị ga-atụle ihe ndị a.
Kedu ihe dị na kọmpụta laptọọpụ m?
Enwere ọtụtụ ụdị ikpe na nsogbu nwere ike ime na laptọọpụ laptọọpụ. Anyi n’egosiputara gi nke kachasi n’etiti gi nke ichoro imata:
Ahụigodo anaghị aza.
Igodo na-aza n'onwe ya.
M kụrụ otu igodo ọ dị ka m kụrụ 10 n'otu oge.
Otu igodo anaghị arụ ọrụ.
Nchikota isi adighi aru oru.
Igodo m na-apinye emetụtaghị na nke gosipụtara na ihuenyo.
Esi edozi laptọọpụ laptọọpụ ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ
Enwere ike inwe ọtụtụ okwu ma ọ bụrụ na keyboard laptọọpụ anaghị arụ ọrụ. Anyị ga-ebu ụzọ chọpụta ma ọ bụ nsogbu anụ ahụ ma ọ bụ ngwaike o ọ bụ n'ihi sọftụwia ahụ. Nke a ga - abụ igodo iji dozie ya.
Otu esi edozi ya ma oburu na obu software
Gbanyụọ laptọọpụ ma gbanyụọ
Mgbe ụfọdụ, ngwọta kachasị mfe kachasị dị irè. Ya mere, anyị na-akwado na ihe mbụ ị ga-eme ma ọ bụrụ na laptọọpụ kiiboodu anaghị arụ ọrụ Malitegharịa ekwentị ahụ iji nyochaa na ọ bụghị nsogbu otu oge.
Lelee Windows components na Command ozugbo
Ọ bụrụ na laptọọpụ anyị anaghị arụ ọrụ n'ihi ngwanrọ ahụ, ihe mbụ anyị kwesịrị ịlele bụ na ihe Windows niile na-arụ ọrụ nke ọma. Iji mee nke a, anyị ga-eme ihe ndị a:
Na nyocha ọchụchọ na ala aka ekpe nke ihuenyo ahụ, anyị na-ede: CMD o Nye iwu ozugbo ma anyị na-agba ya ọsọ dị ka Onye nchịkwa.
Ozugbo windo ahụ mepere, anyị na-eme iwu na-esonụ: sfc / scannow
Usoro a ga - enyocha Windows niile. Mgbe ị gwụchara, anyị ga-amalitegharị kọmpụta ahụ.
Melite ọkwọ ụgbọala keyboard
Mgbe ụfọdụ, ọkwọ ụgbọala akụrụngwa na-akpaghị aka na-emelite na-aghọ ochie na nke ochie, si otú a kwụsị ịrụ ọrụ. Ka ewere melite ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ usoro njikwa, anyị ga-eme ihe ndị a:
Na nyocha ọchụchọ na ala aka ekpe nke ihuenyo ahụ, anyị na-ede: Njikwa ngwaọrụ.
Anyị na-enweta ngalaba Ahụigodo ma ọ bụ kiiboodu.
Anyị na-ahọrọ ngwaọrụ ndị dị n'ime ngalaba na site na ịpị aka nri anyị na-enye ya Melite ọkwọ ụgbọ ala.
Tinyegharịa ndị ọkwọ ụgbọala keyboard
Ọ bụrụ na imelite ezughị, anyị ga-anwa Tinyegharịa ndị ọkwọ ụgbọala keyboard. Iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ, anyị ga-emerịrị ihe ndị a:
Anyị na-ahọrọ ngwaọrụ ndị dị n'ime ngalaba na site na ịpị aka nri anyị na-enye ya Iwepụ ọkwọ ụgbọala.
Anyị na-agbanye laptọọpụ maka ihe Windows na-akpaghị aka wụnye ọkwọ ụgbọala ewepu na ike na-esote na / buut.
Lelee na emebere keyboard ahụ n'asụsụ anyị
Na arụmọrụ keyboard adịghị mma nwekwara ike ịbụ n'ihi eziokwu ahụ ahazighi ya n'asusu anyi. Iji lelee / hazie ya, anyị ga-eme ihe ndị a:
Na nyocha ọchụchọ na ala aka ekpe nke ihuenyo ahụ, anyị na-ede: Ntọala mpaghara na asụsụ.
Anyị na-enyocha asụsụ ahọpụtara ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa anyị ga-agbanwe ya.
Wụnye antivirus ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala keyboard
Nje virus nwere ike ịmetụta ihe niile dị na kọmputa, ya mere ọ ga-adị mkpa gafere antivirus iji lelee na odighi malware o nchekwa obi ojoo na-emetụta ọrụ nke keyboard nke laptọọpụ anyị.
Lee, anyị hapụrụ gị abụọ posts na nke kacha mma antivirus na anyị nwere ike ịhụ maka free online:
6 Kacha mma free online antivirus na-arụ ọrụ zuru oke
Otu esi edozi ya ma oburu na obu nsogbu ngwaike
Ọ bụrụ na nsogbu adịghị na ngwanrọ ahụ, ọ ga-abụ na ọ bụ ngwaike nsogbu (wiring ma ọ bụ igodo gwụsịrị) na ebe a ihe na-agbagwoju anya, n'ihi na ọ ga-abụ na ọ ga-achọ a Ọrụ pụrụ iche na ndị ọkachamara ọkachamara iji dozie nsogbu ahụ.
Lelee ma ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu ngwaike: anyị na-abanye na BIOS na keyboard
Iji lelee ma ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu ngwaike, ihe mbụ anyị nwere ike ime bụ tinye BIOS nke komputa dị ka ndị a:
Anyị na-agbanye otu na ozugbo anyị pịa: Gbanyụọ + F2, F8 o Fxnumx. Ọ bụrụ na laptọọpụ abanye na BIOS, mgbe ahụ ahụigodo ahụ dị mma ma na-arụ ọrụ nke ọma na n'ezie anyị kwesịrị usoro kọmputa.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịbanye na BIOS na-eso usoro ndị dị n'elu, mgbe ahụ nsogbu nke keyboard anaghị arụ ọrụ ga-abụ n'ihi njehie ngwaike.
Abụọ ngwọta ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ ngwaike
Were laptọọpụ gaa ọrụ ọkachamara na ndị ọkachamara ọkachamara
Nke a bụ nhọrọ kachasị atụ aro, karịsịa ma ọ bụrụ na laptọọpụ nọ n'okpuru ikike. Ọ bụghị naanị na anyị nwere ike imebi kọmputa site na iji ya gaa ọrụ pụrụ iche na-enweghị ụgwọ ọ bụla, ma mgbe anyị mepee laptọọpụ ahụ, anyị nwere ike hapụ akwụkwọ ikike.
Y ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'okpuru akwụkwọ ikike, Anyị ekwesịghị imeghe laptọọpụ anyị ma ọ bụrụ na anyị emebeghị ya na mbụ, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe dị nro ahụ, mmejọ ọ bụla nwere ike ime ka akụrụngwa ndị ọzọ aba uru.
Ọ bụrụ na anyị anaghị eme ụdị ihe a, nkwanye anyị bụ ka ị hapụ ya n'aka onye ọkachamara.
Yana screwdriver, anyị na-emeghe kiiboodu (anaghị atụ aro ya)
Ọ bụrụ na anyị emepeela laptọọpụ tupu mgbe ahụ ma nwee ahụmịhe ịmepe kọmpụta na / ma ọ bụ wụnye akụrụngwa na nke anyị, ọ ga-adịrị anyị mfe ebupusi keyboard nke laptọọpụ anyị iji hụ ihe na-akụ afọ n'ala.
Ozugbo imeghe laptọọpụ ewepụla kposara ndị egosiri, na ọnọdụ a anyị ga-elele ọkwa ahụ keyboard njikọ. Anyị ga-eji nwayọọ kwụpụ njikọ ahụ wee hụ ma ọ ga-ehicha ya. Anyị na-ejikọghachi ya ma chọpụta ma ọ rụọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Kọmputa laptọọpụ anaghị arụ ọrụ: Otu esi edozi ya?
Kọmputa m mechiri n'onwe ya: gịnị kpatara ọ ji eme?
Etu ị ga-esi nwetakwa draịvụ ike mebiri emebi